विमानभित्र यात्रुको खुट्टामा तातो चिया खसेपछि ९० लाख क्षतिपूर्ति ! – ramechhapkhabar.com
विमानभित्र यात्रुको खुट्टामा तातो चिया खसेपछि ९० लाख क्षतिपूर्ति !
सामान्य दिनचर्याका क्रममा चियाका पारखीसँग अप्रिय घटना हुन्छ, शरीरमा चिया खस्छ । तर कहीँकतैबाट क्षतिपूर्ति पाइँदैन । आयरल्यान्डमा भएको एउटा घटनामा यात्रुको खुट्टा चिया पोखिएबापत विमान कम्पनीले ९० लाख बढी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ । विमानमा यात्रा गर्ने क्रममा एक बालकको खुट्टामा तातो चिया खसेपछि उनकी आमाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । मुद्दाको फैसला सुनाउँदै अदालतले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको छ ।
आयरल्यान्डका एमरे कराक्याले टर्किस एयरको विमानमा यात्रा गर्दा खुट्टामा तातो चिया पोखिएको थियो । चिया पोखिएको दायाँ खुट्टामा दाग समेत बसेको ती बालकको दाबी छ । ४ वर्षअघि एमरे १३ वर्षीय हुँदा भएको घटनापछि अदालतमा मुद्दा चलेको थियो । घटनाबारे ती बालककी आमालाई थाहा भएपछि अदालतमा मुद्दा गरेकी थिइन् ।
मुद्दामा आमाले बालकको मासिक र शारीरिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गरेको दाबी गरेकी छन् । एमरेको खुट्टाको उपचार गर्न ३–४ हप्ता अस्पतालमा बस्नुपरेको र दाग हटाउन शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने चिकित्सकको राय रहेको दाबी अदालतमा गरिएको थियो । अदालतले फैसला सुनाउँदै एमरेलाई ५६ हजार पाउन्ड अर्थात् लगभग ९० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ ।